घररगाडी किन्नेलाई कहिल्यै ब्याज नबढाउने शर्तमा बैंकहरूले दिन थाले ऋण - Arthapage
घररगाडी किन्नेलाई कहिल्यै ब्याज नबढाउने शर्तमा बैंकहरूले दिन थाले ऋण
प्रकाशित मितिः २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १५:३६ November 5, 2020
ऋण चुक्ता हुने अवधि जति लामो भयो, स्थिर ब्याजदर पनि बैंकहरुले त्यति बढी तोकेको पाइन्छ। अर्थात एउटै बैंकबाट १५ वर्षभित्र चुक्ता गर्नेगरी लिइने घररगाडी कर्जाभन्दा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्नेगरी लिइने कर्जाको ब्याजदर कम भएको पाइन्छ।
बैंकहरुले घररगाडी कर्जामा घटबढ नहुनेगरी तोकेको ब्याजदर ७. ९९ देखि १४ प्रतिशतसम्म छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि घर कर्जा लिनेलाई ब्याजदर ७. ९९ देखि ८. ९९ सम्म तोकेको छ। १० वर्षसम्मको लागि ९ देखि ९.९९ सम्म तथा १५ वर्षसम्मका लागि ऋण लिँदा १० देखि १०. ९९ सम्म स्थिर ब्याजदर तोकेको छ।
त्यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि स्थिर ब्याजदरमा घरकर्जा लिनेलाई ११.८९ प्रतिशत दर तोकेको छ। ५ वर्षसम्मको लागि ९.८९ प्रतिशत, १० वर्षसम्मका लागि १०,८९ प्रतिशत छ।
गाडी कर्जातर्फ ५ वर्षको लागि ९.९९ प्रतिशत, १० वर्षसम्मका लागि १०।.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर बैंकले तोकेको छ।
असोज मसान्तसम्म बैंकको आधार दर जम्मा ८.३१ प्रतिशत छ।
एभरेष्ट बैंकले १० वर्षमाथिको अवधिका लागि हाउजिङ लोन ९१ करोडसम्म० स्थिर ब्याजदर १३.४८ प्रतिशत तोकेको छ। ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि यस्तो दर १०. ९८ प्रतिशत मात्रै भने ५ देखि १० वर्षसम्मको अवधिका लागि ११. ९८ प्रतिशत छ।
त्यस्तै स्थिर दरमा गाडी किन्नेलाई ऋण दिनका लागि ३ वर्षसम्मको अवधिका लागि १०. ७३ प्रतिशत, ५ वर्षसम्मका लागि ११.४८ प्रतिशत १० वर्षसम्मका लागि १२. ४८ प्रतिशत तोकेको छ।
सिद्धार्थ बैंकले डेढ करोड रुपैयाँसम्म ५ वर्षे अवधिसम्मका लागि घर कर्जा लिनेलाई ८.९९ देखि ९.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ भने ५ देखि १० वर्षसम्मको लागि ९. २५ देखि ९.९९ प्रतिशतसम्म तोकेको छ। त्यस्तै १० वर्षभन्दा माथिको अवधिका लागि ९. ५ देखि १०. ५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ।
अटो लोनमा ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि ८.९९ देखि ९.९९ सम्म तथा १० वर्षसम्मका लागि ९.५० देखि १०. ९९ प्रतिशतसम्म तोकेको छ।
प्रकाशित मितिः २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १५:३६ |
Prevडिसहोमले इन्टरनेटसँगै अब सिम टिभी पनि दिने
Nextनगरभवनमा सपिङ कम्पलेक्स, बागेश्वरी मन्दिरको पुर्वतर्फ चिल्डे«न पार्क बनाउने निर्णय